"Fa avy ny andro, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinana ; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. " Jaona 4:23
Ny tena foto-kevitra ijoroan’ny ankamaroan’ny antokom-pivavahana, dia asa sy fombam-pivavahana tsy maintsy tanterahina, mba hampitoniana ilay Avo Indrindra sy hanatanterahana izay takian’ny fahamarinany. Na ny mpanompo sampy aza dia mitondra fanatitra ho an’ny sampiny, mba hankasitrahana azy.
Fa tsy mba antony filan-tombony toy izany kosa no itsaohantsika kristiana an’Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zanany. Tsy midera isika mba hahazo famonjena, na fiarovana na fanafahana, fa satria efa nahazo. Tsy afaka manao na inona na inona isika, hahavonjy ny tenantsika: na hitia an’Andriamanitra, na hanao izay hahafaly Azy, na hankatò Azy. Koa Izy no nanao ny zavatra rehetra, tamin’ny nanomezany Mpamonjy ho antsika.
Ny fitsaohana tokony hataontsika amin’Andriamanitra dia fanehoana tsotra fotsiny ny fankasitrahantsika, fotoana ahafahana misaotra sy mankalaza ny halehibeny. Tsindriana mafy io fahasamihafana fototra io, misy eo amin’ny tena fitsaohana marina sy ilay antsoina amin’ny ankapobeny hoe fanompoam-pivavahana. Ao anaty fanompoam-pivavahana dia te hitondra zavatra ho an’Andriamanitra ny olona, ary mihevitra fa hanaiky izany Andriamanitra ka hamela heloka sy hikarakara azy. Nefa aoka ho azontsika tsara fa Andriamanitra aloha no nanomboka nanome fahasoavana antsika, ka tokony hino Azy isika, ary tokony hisaotra Azy noho ny maha Izy Azy sy noho izay nataony. Ny fitiavantsika, izay miseho amin’ny alalan’ny fiderana, dia tsy inona fa famaliantsika ny fitiavany, ary rariny izany. “Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha” (1 Jaona 4:19). Tokony hasehontsika amin’ny fomba fiainana sy fihetsika ihany koa izany. Aoka izay rehetra atao, hanome voninahitra Ilay Andriamanitra Mpamonjy antsika.